ATN: ကံအကောင်းဆုံးလူတယောက်ရဲ့ဖွင့်ဟ ၀န်ခံချက်
ဘာတွေစားခဲ့တယ် ဆိုတာလည်း ရေးဦးလေ။ ဒန်ပေါက်တွေဆိုလား..း)
ခု ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့လို့ ပျော်နေတော့လဲ
ဟုတ်ပါရဲ့.. mirror ပြောသလို- ဘယ်သူ့မှ မတွေ့ချင်တော့ဘူး လို့ပြောပြီး..ခုတော့.. လူတွေဆုံဖြစ်ကြတာ.. ဖတ်ရတာနဲ့တောင်..ပျော်စရာ ကောင်းနေ တယ်။ ဆက်လက် ကံကောင်းပါစေ လို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်..ကိုအောင်သာငယ်ရေ။
အားကျတယ်ဗျာ ကျနော် ထင်ပါတယ် အစ်ကို ဘာစကား မှဝင်ပြောနိုင်လိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူး လို့ ။ အဲဒါ ရင်ဘတ်ထဲ လှိုက်နေတဲ့အခါ ဖြစ်တဲ့ ခံစားမှု့ မို့လားဗျာ ။ ဒီထက်ကံကောင်းတာတောင် ဒီထက် ကံမကောင်းတော့ဘူး ။
အင်း ညီမလည်း အဲဒီ စာပေဟောပြောပွဲကိုလာချင်တာ.. သမီးလေးက ငယ်နေလို့ လေယာဉ်စီးလို့မကောင်းတာနဲ့ မမိုးချို ကိုတွေ့ချင်လို့။နောက်နှစ်တော့ရောက်အောင်လာခဲ့ဦးမယ် ။ တွေ့ချင်တဲ့သူစာရင်းထဲမှာ ကိုကြီးအောင်သာငယ်ပါထည့်ထားလိုက်မယ်။
ဆက်ရေးအုံးနော်... ဓါတ်ပုံတွေလဲ တင်ပေးပါအုံး...။
ဟုတ်တယ်အစ်ကို။ ကံကောင်းလိုက်တာနော်။ တူးလည်းအဲဒီဝိုင်းထဲ ပါချင်လိုက်တာ။
မပန် - ပျော်စရာကြီးပေါ့ဗျာ။ သို့သော်လည်း အပျော်တွေပဲ တော်တော် စားမိခဲ့တော့ ဒန်ပေါက်ကို နည်းနည်းပဲ စားနိုင်တော့တယ်။ ကြက်သားတောင် မစားမိဘူး။
KOM - မင်္ဂလာပါဗျာ အမြဲဖတ်တာ ကျေးဇူးပါ။
mirror - ဒီလိုပေါ့ ညီမရေ့... လူသား တယောက် ဆိုတော့လည်း... တက်လိုက်... ကျလိုက်... ဘ၀ လှိုင်းတွေထဲမှာ... ၀မ်းနည်းလိုက်... ပျော်ရွှင်လိုက်ပေါ့
မကေ - အားလုံးကို အတူ ပျော်စေချင်ပါတယ်ဗျာ ... ဆုတောင်းပေးတဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူး အထူးပါ...
ပေးတဲ့ဆုနည့် ပြည့်ပါစေလို့လည်း ဆန္ဒပြုပါတယ်။
ဆောင်းယွန်းလ - တနေ့နေ့တော့ တွေ့ကြမှာပပျါ... ညီရေ့က...
ကိုရင်ညိန်း - အေးလေကွာ ... ကိုယ့်ညီ ပြောတဲ့အတိုင်း အတိအကျပါပဲ...
ယောနသံစင်ရော် - အကို့ စာရင်းထဲမလည်း ငါ့ ညီမကို ထည့်ထားလိုက်ပြီး)
သက်ဝေ - တွေ့ချင်တဲ့ သူတွေ စာရင်းထဲ ... သက်ဝေလည်း ပါသွားလိုက်ပြီ။ အားလုံးဆီက ခွင့်ပြုချက်ရရင် ဓါတ်ပုံတွေ တင်ပေးပါ့မယ်။
မတူး - တနေ့နေ့ပေါ့လေ ညီမရေ့...
ကျနော့်အဘို့ တော့ အဲဒီလို ကံတရား မပါလာဘူးဗျာ....
အော်... ဖလော်၇ီဒါကနေ တကယ်ပြောင်းလာပြီးကိုးဗျ။ ကောင်းတယ်ဗျာ။ ၀မ်းသာတယ်။ စာပေဟောပြောပွဲ မလာရတာ နာတာပဲဗျာ။
မနာလိုစရာကြီးး ။အကိုရေ အသေးစိတ်ရေးပါအုန်း။ ဟိဟိ ဖြစ်နိုင်ရင် မမိုးချိုနဲ့ ကိုကျော်ဝဏအကြောင်းပါ ပို့ စ်သပ်သပ်တင်ပေးနော်။ အကိုက လူကိုယ်တိုင်တွေ့ ခဲ့ရပြီဆိုတော့
ကိုသစ် - ကျနော်တွေ့ချင်တဲ့ သူတွေထဲမှာလည်း ကိုသစ် ပါတယ်လေဗျာ... Someday! Somewhere!
ကိုပြတိုက် - ရောက်တာတောင် ၃ လပြည့်တော့မယ်... ပြတိုက်ကြီးက ဘယ်နား သွားထိုင်နေသတုန်းဗျ...
လင်း - မိုးချိုက အသားဖြူဖြူ အပြုံးချိုချိုနဲ့...
ပြီးတော့... ဆံပင်ကို ယောက်ျားလေးလို အတိုညှပ်... ပုဆိုးလေး ကပ်ပေးလိုက်ရင်.. ဆရာတင်မိုး အသေးလေးကို မြင်ရသလိုပေါ့..း)
ကိုဝဏကလည်း မိုးချိုလို အသားဖြူဖြူ အပြုံးချိုချိုနဲ့...
သိပ်ကို လိုက်ဖက်တင့်တယ်တဲ့ ကျက်သရေရှိတဲ့ မောင်နှံပေါ့ကွယ်...